Permalink Reply by Kaung latt on January 9, 2013 at 22:25
Excuse me,Do British Council have scholarships to attend English Training Courses?Please?
Permalink Reply by Kaung Htet Tun on July 3, 2014 at 17:11
I would like to know, how many days should the online renewal be done advance of the due date? And will the online renewal is done less than2days before due date be considerable? :)
Permalink Reply by Yamin Nyi Nyi on July 3, 2014 at 17:56
Dear Kaung Htet Tun
Thanks so much for the enquiry ~ yes it's better if you renew the books2day before they are due. Your books will be extended for another2weeks unless they are reserved by another member. You will also receiveareply from the library within2days.
Permalink Reply by venus on August 2, 2014 at 11:01
LCCI level 1,2 November Series ငွေသွင်းရမယ့် ရက်သိချင်ပါတယ်။
Permalink Reply by British Council Customer Service on March 5, 2015 at 9:50
LCCI level 1,2 November Series ကို ဩဂုတ်လ ၁၀ ရက် မှ ၂၁ ရက်အထိ တနလာင်္နေ့ မှ သောကြာနေ့ မနက် ( ၀၈:၀၀ ) မှ ညနေ ( ၀၃:၃၀ ) အထိ လက်ခံပေးပါမယ်
Permalink Reply by Sweetie on May 13, 2015 at 12:41
when the adult general English classes will start for this year 2015 ? and let me know the time-table for these classes.
Permalink Reply by kyawmyokhant on October 30, 2015 at 23:02
Dear Net work admin
I would like to ask to you i'm member one day ago but no more remind to my mail about of the English New story,and other lesson of English to read .I wanna learn and also know better way to speak English just like native speaker!What should i do to become native speaker. thanks for read my message !
Permalink Reply by Thit Htoo on April 21, 2016 at 13:32
BC မှာ ဝင်ခွင့်ဖြေဖို့ ဘာတွေကြိုလေ့လားထားသင့်လဲ
Permalink Reply by British Council Customer Service on April 22, 2016 at 14:22
Dear Thit Htoo,
ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲဖြေဆိုရန်အထူးအထွေပြင်ဆင်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူး။ မိမိနှင့်အသင့်တော်ဆုံးအင်္ဂလိပ်စာအဆင့်ကိုစစ်ဆေးပေးခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။ အရေး၊အဖတ်၊အပြော၊နားထောင်စွမ်းရည်တွေကိုစစ်ဆေးသွားမှာပါ။ ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲဖြေဆိုရန်အတွက်ကြိုတင်စာရင်းလူကိုယ်တိုင်လာပေးထားလို့ရပါတယ်။ မိမိ၏နာမည်စာလုံးပေါင်းအင်္ဂလိပ်လို၊ မွေးနေ့၊ ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်များပေးထားပါက အနီးဆုံးစာမေးပွဲရှိတာနဲ့ ဗြိတိသျှကောင်စီက ဖုန်းဆက်ပြီးဆက်သွယ်ပေးမှာပါ။ ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲများမှာ အများအားဖြင့် ဇန်နဝါရီ၊ ဧပြီ၊ ဇူလိုင် နှင့် အောက်တိုဘာလ သင်တန်းများမစမှီမှာစစ်ဆေးတတ်ပါတယ်။ သင်တန်းနှင့်ပါတ်သက်ပြီးအသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကို http://www.britishcouncil.org.mm/my/english/courses-adults တွင်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပြီး ဖုန်း ၂၅၆၂၉၀၊ ၂၅၆၂၉၁၊ ၂၅၄၆၅၈ သို့လည်းဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။